Cayaartoyda Xulka Puntland oo 1-0 kaga badiyey xulka gobolka Banaadir una gudbay Finaalka | SAHAN ONLINE
Cayaartoyda Xulka Puntland oo 1-0 kaga badiyey xulka gobolka Banaadir una gudbay Finaalka
MUQDISHO – Cayaartoyda xulka kubada cagta Puntland ayaa guul muhiim ah ka gaaray ciyaartii ay maanta la yeesheen xulka gobolka Banaadir ee Is-reeb-reebka tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo Banaadir.
Cayaarta labada xul ayaa ahayd mid aad u xiisa badnayd,waxaana kasoo qeybgalay taageerayaal aad u farabadan,iyadoona shacabka Soomaaliyeed eek u sugan gobolada ay kala socdeen warbaahinta kala gedisan.
Cayaarta qeybtii hore ayaa ku dhammaatay 0-0 balse qeybtii danbe oo ahayd mid aad u xiisa badan ayey kooxda Puntland gool la yimaadeen daqiiqadii 74aad,balse sababo aan la ogeyn ayaa looga diiday goolkaas.
Balse saddex daqiiqo kadib markii cayaartu mareysay daqiiqadii 77aad ayey la yimaadeen gool kale oo uu si qurxoon u dhaliyey laacibka Yacquub Cismaan oo sita number 16.
Sidoo kale daqiiqadii ugu dambeysay ee cayaarta kooxda Puntland ayaa laga diiday rogoore ay xaq u lahaayeen.
Xulka kubada cagta Puntland ayaa iyagu koobkan haysta isla markaana markii labaad usoo baxay Finaalka,waxayna cayaarta ugu dambeysa la ciyaari doonaan xulkii kasoo baxa cayaarta dhexmari doonta xulalka Jubaland iyo Koonfur galbeed.
Guushii ay Puntland ka gaartay xulka Banaadir awgeed ayaa waxaa dabaaldegyo waaweyn ay ka soconayaan gobolada Puntland.